जान्नुहोस ! रक्तदान गर्नुका फाइदाहरु « Pariwartan Khabar
जान्नुहोस ! रक्तदान गर्नुका फाइदाहरु
7 February, 2018 9:37 am
मुटु स्वस्थ्य रहन्छ
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, नियमित रक्तदान गर्नाले आइरनको मात्रा ठिक रहन्छ । शरीरमा आइरन बढेमा अक्सिडेटिभ खराब हुने गर्छ, जसबाट टिस्यु खराब हुन्छ । रक्तदान गर्नाले शरीरमा खाली आइरनको मात्रा मात्रै ठिक हुँदैन, मुटुको रोगबाट पनि बचाउँछ ।
यसमा कुनै शंका छैन, रक्तदान गरेपछि कस्तो मनमा सन्तुष्टि हुन्छ । किनकि, मानव रगतको कुनै विकल्प नै हुँदैन, त्यसैले यो एक महत्वपूर्ण काम पनि हो । जब तपाई रक्तदान गर्नुहुन्छ, त्यसले ३/४ अलग–अलग बिरामीलाई काम लाग्छ, जसले खुशी र सन्तुष्टिको भाव दिन्छ ।
तौल घटाउँन मद्दत गर्छ
एक पटक रक्तदान गर्दा ६५० देखि ७०० किलो क्यालोरी घट्न सक्छ । तौल घट्नु–बढ्नु क्यालोरीमा भरपर्छ, यदि क्यालोरी घटेमा तौल पनि घट्छ । यद्यपी, रक्तदान ३ महिनामा एक पटक मात्रै गर्नुपर्छ ।
कलेजोको रोग र क्यान्सरको जाखिम कम
यद्यपी, यस्तो कुनै अध्ययन भएको छैन, जसले रक्तदान गर्नाले कलेजो रोग र क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ भन्ने दाबी गर्छ । तर, एक अध्ययनले रक्तदान गर्नाले कलेजोमा राम्रो असर पर्ने देखाएको छ । कलेजोको कार्य आइरन मेटाबोलिजममा निर्भर गर्छ । रक्तदानले शरीरमा आइरनको मात्रा ठिक हुन्छ र कलेजो खराब हुनबाट बचाउँछ ।